နေအိမ် - ငါ AM ယီမင်
လမ်း, ပင်လယ်, မိုးကောင်းကင်
တွင် 2015 နှင့်ယီမင်သမ္မတနှုတ်ထွက်နှင့်သူ၏ထွက်ပေါက်ပြီးနောက်ယီမင်ကနေ, ယီမင်ဆန့်ကျင်ကာမညီမျှမှုစစ်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကအန္တရာယ်ခဲ့သည်. ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အစိုးရများကလေးများနှင့်အရပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာ၏သေဆုံးခဲ့သည်ထားတဲ့အတွက်အကာအကွယ်ယီမင်လူတို့တဘက်၌စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေ, လက်နက်များရောင်းချနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်အစားဤပြဿနာအပေါ်တားဆီးများနှင့်ဖြန်ဖြေ. ဤရွေ့ကားရာဇဝတ်မှုများကိုစစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကိုကန့်သတ်ထားပေမယ့်ဆော်ဒီအာရေဗျကိုမြေကြီးဝိုင်းရံခဲ့ကြသည်သာ, လေ, နှင့်ယီမင်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကလူသန်းပေါင်းများစွာ၏အသက်ကိုအန္တရာယ်သောတိုင်းပြည်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးဝင်ပေါက်ပိတ်ဆို့နိုင်ရန်အတွက်. နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အစီရင်ခံစာများအဆိုအရ, these crimes have been the worst humanitarian disaster in the last few decades and caused hunger and started diseases like cholera.
ဤဆိုဒ်အတွက်သတင်းနှင့်ဤပြစ်မှုများ၏ရုပ်ပုံများကိုများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်ဆော်ဒီကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့သတင်းအေဂျင်စီများတစ်သပိတ်မှောက်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သောဤပြစ်မှုများ၏လူတွေကိုအကြောင်းကြားဖို့ကြိုးစားထားပါတယ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဆန္ဒပြမှုများအားဖြင့်ဒီမညီမျှမှုစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေး.
တစ်ဦးက: အတွက် 'ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးအစာခေါင်းပါးသောအခါချောက်ကမ်းပါးပေါ်ယီမင် 100 အနှစ်
ဇွန် 11, 2020 3721702
ယီမင်တွင်အဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားသည် 100 ဆော်ဒီ ဦး ဆောင်သောညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်မသွားလျှင်နှစ်ပေါင်းများစွာ, ဂါးဒီးယန်းတနင်္လာနေ့ကဖော်ပြခဲ့သည်. အကယ်၍ စစ်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်, famine could engulf the...
တစ်ဦးကလူရဲ့ site ကိုဆော်ဒီအာရေဗျ၏ရာဇဝတ်မှုများကိုဆန့်ကျင်ယီမင်လူတွေကိုကူညီခြင်းနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသော၏ဘဝအခိုင်အမာထားပြီးယင်း၏အများအပြားနှစ်မြို့ကိုဝိုင်းထားအဆုံးသတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်
ကြှနျုပျတို့ကိုအတူ Connect ကို
IAMYEMEN.COM © 2022 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.